အရငျတုနျးက သူ့ကို ပွနျလိုခငျြတယျ … – Shinyoon
အရငျတုနျးကသူ့ကို ပွနျလိုခငျြနမေိတာ အခြိနျတျောတျောကွာပါပွီ အရငျလိုမဟုတျတော့ပဲ ပွောငျးလဲသှားခွငျးတှမှော ကငျြ့သားမရခဲ့သေးဘူးလေ တဈနနေ့တေ့ော့ အရငျလို ပွနျပွီး ဂရုစိုကျမှာပါဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြလေးနဲ့ ရပျနမေိတုနျးပါပဲ …
အရငျတုနျးကဆို သိပျခဈြပွတတျတာ ပွီးတော့ သိပျဂရုစိုကျတတျတာလေ … ကိုယျ့မကျြနှာလေး နဲနဲလေးပကျြသှားတာနဲ့ ပွာယာခတျနတေတျတယျ ခုတော့ ကိုယျသမေတတျဖွဈနရေငျတောငျ သှေးအေးနလေိုကျတာမြား ကမ်ဘာအအေးဆုံးဆိုတဲ့အရပျတှတေောငျ ကိုယျ့တို့ဆကျဆံရေးတှလေောကျမအေးဘူးလို့ထငျရတယျ
ကိုယျပြျောဖို့ဆို … သူငိုနရေလဲ အဆငျပွပေါတယျဆိုတဲ့သူက ကိုယျငိုနတေဲ့အခါတောငျ သူရီနနေိုငျတဲ့အထိ ပွောငျးလဲသှားခဲ့ပွီ အရငျကလို သိပျခဈြတတျတဲ့သူတဈယောကျကိုပဲ ပွနျလိုခငျြတယျ အခုလို အနားမှာရှိပွီး ဝမျးနညျးနရေတာမြိုးတှေ မဖွဈခငျြတော့ဘူး ပငျပနျးလှနျးနပေါပွီ …
တကယျလို့အရငျလိုမဖွဈနိုငျတော့ဘူးဆိုရငျတောငျ အခုလိုမြိုး အကွာကွီးပဈမထားဖို့ကိုပဲ တောငျးဆိုခငျြတာပါ …. တဖွေးဖွေးနဲ့ ကိုယျနနေိုငျသှားမှာတောငျ ကွောကျနမေိသေးတာလေ … ဖွဈနိုငျမယျဆိုရငျတော့ အရငျတုနျးက သူ့ကို ပွနျလိုခငျြတယျ …
အရင်တုန်းက သူ့ကို ပြန်လိုချင်တယ် …
အရင်တုန်းကသူ့ကို ပြန်လိုချင်နေမိတာ အချိန်တော်တော်ကြာပါပြီ အရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲ ပြောင်းလဲသွားခြင်းတွေမှာ ကျင့်သားမရခဲ့သေးဘူးလေ တစ်နေ့နေ့တော့ အရင်လို ပြန်ပြီး ဂရုစိုက်မှာပါဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ ရပ်နေမိတုန်းပါပဲ …
အရင်တုန်းကဆို သိပ်ချစ်ပြတတ်တာ ပြီးတော့ သိပ်ဂရုစိုက်တတ်တာလေ … ကိုယ့်မျက်နှာလေး နဲနဲလေးပျက်သွားတာနဲ့ ပြာယာခတ်နေတတ်တယ် ခုတော့ ကိုယ်သေမတတ်ဖြစ်နေရင်တောင် သွေးအေးနေလိုက်တာများ ကမ္ဘာအအေးဆုံးဆိုတဲ့အရပ်တွေတောင် ကိုယ့်တို့ဆက်ဆံရေးတွေလောက်မအေးဘူးလို့ ထင်ရတယ်
ကိုယ်ပျော်ဖို့ဆို … သူငိုနေရလဲ အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့သူက ကိုယ်ငိုနေတဲ့အခါတောင် သူရီနေနိုင်တဲ့အထိ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီ အရင်ကလို သိပ်ချစ်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုပဲ ပြန်လိုချင်တယ် အခုလို အနားမှာရှိပြီး ၀မ်းနည်းနေရတာမျိုးတွေ မဖြစ်ချင်တော့ဘူး ပင်ပန်းလွန်းနေပါပြီ …
တကယ်လို့ အရင်လိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တောင် အခုလိုမျိုး အကြာကြီးပစ်မထားဖို့ကိုပဲ တောင်းဆိုချင်တာပါ …. တဖြေးဖြေးနဲ့ ကိုယ်နေနိုင်သွားမှာတောင် ကြောက်နေမိသေးတာလေ … ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အရင်တုန်းက သူ့ကို ပြန်လိုချင်တယ် …